Maitiro Ekushandura YouTube Mavhidhiyo kuita Mp3 ne iPhone ♪ ♫ ♬ | IPhone nhau
Uri kutsvaga chinja mavhidhiyo eYouTube kuita mp3? Kusvika pamusika wekushambadzira mimhanzi masevhisi kwakabvumidza vashandisi vazhinji kuti vasarudze kubhadhara mari yemwedzi wega, kungave vakazvimiririra kana vakagovana kuchengetedza maeuro mashoma, kuti vakwanise nakidzwa nemimhanzi yako yaunofarira chero nguva, chero kupi, izvo zvakatendera humbavha mumunda wemimhanzi kudzikiswa zvakanyanya.
Asi havazi vese vanofarira kuteerera mimhanzi nguva dzese uye vanoramba vachishandisa humbavha kana kuYouTube, kurodha pasi mavhidhiyo avanofarira kana kutora mimhanzi kubva kwavari mu mp3 fomati kuti vateedzere kune yavo iPhone. Muchikamu chino tiri kuzokuratidza nzira dzakasiyana ku chinja mavhidhiyo eYouTube kuita mp3 ne iPhone.
Sezvo isu tese tichiziva, Google neApple hazvibvumidze vanogadzira kuti vape mafomu muApp Store izvo zvinokutendera kuti utore mavhidhiyo zvakananga mune yavo tsananguro, saka maapplication anotibvumira kuti tidaro, ivo vakaputirwa pasi peimwe rondedzero kuti vatore mavhidhiyo zvakawandisa kubva pa internet, tisingataure YouTube chero nguva. Kana iwe uchifarira download YouTube mavhidhiyo zvakananga kune yako iPhoneMune iyi link yatichangobva kukusiya, tinokuratidza dzakawanda dzesarudzo dzinowanikwa muApp Store uye kunze kwazvo.
Para download mimhanzi kubva kuYouTube mavhidhiyo mune MP3 fomati zvakananga pa iPhone yedu, zvinhu zvinobva zvaoma uye isu tinomanikidzwa kutora matanho akasiyana, sezvo tichifanira kutanga tavhota vhidhiyo yeYouTube uye tobva tashandisa chimwe chishandiso kuburitsa odhiyo kubva kwavari, kunyangwe mushure mekuita imwe tsvagiridzo nekushandisa masevhisi ewebhu, tinogona kuzviita zvakananga nechishandiso kuburikidza newebhu webhu.
1 Chinja YouTube Mavhidhiyo kuva MP3
1.1 Vhidhiyo kune MP3 Converter
1.2 YEMAHARA MP3 yeYouTube
1.4 Amerigo Turbo Bhurawuza
2 Chinja YouTube vhidhiyo zvinongedzo kuMP3
3 Chinja YouTube Mavhidhiyo kuva MP3 neJailbreak
Chinja YouTube Mavhidhiyo kuva MP3
Sezvandambotaura pamusoro, muApp Store hapana chishandiso chinotibvumidza kutora chete odhiyo kubva kuYouTube mavhidhiyo. Nekudaro, isu tinowana manyorerwo anotibvumidza kutora odhiyo kubva kumavhidhiyo mafaera, basa ratichazotora mukana wekubvisa mimhanzi kubva kumavhidhiyo atakadhawunirodha kuchinhu chedu kuburikidza nenzira dzandakaratidza mukati ichi chinyorwa.
Vhidhiyo kune MP3 Converter
NeVhidhiyo kune MP3 Converter tinogona kubvisa odhiyo kubva kumavhidhiyo ese atakachengeta pane yedu kifaa, muDropbox, iClood, Google Drive kana One Drive dhairekitori. Ichi chishandiso chinoenderana nemafomati 3GP, FLV, MP4, MKV, MOV, MXF, MPG ... uye inotitendera chinja odhiyo yemavhidhiyo aya kuita mafomati anotevera: MP3, ACC, M4R, WAV, M4A ...
Kana tichiita shanduko, iyi application inotibvumidza isu kuseta iyo bitrate, vhoriyamu uye mamwe ma parameter ayo anozokanganisa mhedzisiro mhedzisiro yekutendeuka. Kana kutendeuka kwapera tinogona kugovana akatorwa maodhiyo faira nemamwe maapplication, maapplication asingasanganisi neMusic, iyo yemuno iOS app yekuteerera kumimhanzi.
Vhidhiyo kune MP3 Converter inowanikwa kuti utorwe zvachose mahara asi izere neshambadziro, uye dzimwe nguva inova isingatsungiririki kuishandisa. Kana isu tichida kuwana zvakanyanyisa kubva mukushandisa uye nekudaro kubvisa kushambadzira, tinogona kushandisa izvo zviri-mu-kutenga kutenga kuzvibvisa, iko kutenga kune mutengo we4,49 euros.
YEMAHARA MP3 yeYouTube
YEMAHARA MP3 yeYouTube ndeimwe yezvishoma zvinoshandiswa zvinowanika muApp Store izvo zvinotibvumira kutora odhiyo kubva kumavhidhiyo atakachengeta pane yedu kifaa, haitipe sarudzo yekuwana maforodha mune yekuchengetedza gore kwatingave nemafaira aya akachengetwa. Ichi chishandiso hachipe sarudzo dzekumisikidza kana zvasvika pakutora odhiyo kubva kumavhidhiyo. MP3 yemahara yeYouTube inowanikwa mahara kurodha pasi.
MyMP3 ingangoita idombo rekushandisa kwekutanga, YEMAHARA MP3 yeYouTube, kubvira inotipa mikana imwecheteyo pakubvisa odhiyo kubva muvhidhiyo izvo zvatakambo chengeta kubva kuchishandiso chedu. Iyo Anwendung inowanikwa kurodha mahara, asi kushambadza kwakashata kupfuura kupinda kwemasvosve mumunda.
Kana isu tichida kuvabvisa, tinogona kuenda ku checkout uye kubhadhara 8,99 euros, mutengo wakanyanyisa kune mashoma kana asina sarudzo dzaanotipa kana tikazvienzanisa neVhidhiyo kune MP3 Converter, iyo inotipa nhamba yakakura yekugadzirisa sarudzo kana uchishandura hafu yemutengo.
Amerigo Turbo Bhurawuza
Imwe yeakanakisa kunyorera kurodha chero vhidhiyo kubva painternet, Amerigo, zvakare inotibvumidza isu kushandura mavhidhiyo akarodha pasi kuburikidza nechishandiso kuva MP3 fomati, kuti gare gare ugovagovana navo nemamwe mashandisirwo kana kuitamba yakananga mairi nekuda kwekuti iri inoenderana nekutamba kumashure.
Kuti tidaro, isu tinongofanirwa kuenda kuvhidhiyo yatakatora pasi uye tinya pane vhidhiyo sarudzo, sarudza Shandura wobva wadzvanya paMP3. Mumasekondi mashoma kurira kwevhidhiyo yatakatora pasi kuchave kuri kuwanikwa mukushandisa.
Chinja YouTube vhidhiyo zvinongedzo kuMP3
Kunyangwe chokwadi chekuti dura reSafari neChrome muIOS rakawedzeredzwa, muApp Store tinogona kuwana mamwe mabhurawuza ayo anotipa zvimwe sarudzo kupfuura Safari uye Chrome pamwe chete, senge mukana wekukodha zvirimo zvakananga kuchishandiso kana kuzvichengeta mumasevhisi ekuchengetedza gore senge Puffin. Kuti tishandure zvakananga mavhidhiyo eYouTube tisina kuatora, tichashandisa iyo Puffin Web Browser uye neweweTubemp3 webhusaiti. Pano tinokuratidza matanho ese aunoteedzera kurodha mimhanzi kubva kuYouTube mavhidhiyo kuenda kuMP3 faira.
Pakutanga tinotora Puffin application, yazvo ini ndinokusiira iwe link panoperera chikamu chino.
Tinogona ipapo kushandisa iyo YouTube kunyorera ku tsvaga mavhidhiyo atinoda kutora Kana isu tinogona kushandisa yakasanganiswa browser kushanyira YouTube uye kuteedzera iyo link yevhidhiyo iyo yatinoda kurodha pasi.
Kana tangoteedzera iyi link, tinovhura iyo nyowani tebhu muPuffin uye tinonyora kero inotevera www.youtube-mp3.org
Mubhokisi rekutsvaga rinoonekwa tinoteedzera iyo kero yewebhu uye tora pane Shandura vhidhiyo.
Pikicha yevhidhiyo inozoratidzwa muhwindo rinotevera. Ingo kurudyi uye kana iyo webhu yagadzirisa vhidhiyo iyo Download sarudzo ichaonekwa, tinya pairi uye ichatanga kurodha chete mimhanzi yevhidhiyo yatinoda.
Usati watanga kurodha pasi, Puffin anotibvunza kwatinoda kuchengetera iyo faira rakadzingwa: mubrowser kana mumasevhisi ekuchengetedza ese atakachengeta.
Kuti uwane iyo faira kana kuona kufambira mberi kwekurodha pasi, tinofanirwa tinya pamitsara mitatu yakatwasuka uye tinya pamuseve wezasi. Mune ino tebhu iwe unowana mafaera ese akakoswa mu mp3 fomati. Kubva pane ichi chishandiso iwe unongofanirwa kugovana mafaera ayo ako aunofarira mimhanzi kunyorera, uko iko kweMusic application kusingawanikwe.
PaInternet tinogona kuwana nhamba huru yewebhu services inotitendera tora mimhanzi kubva kuYouTube mavhidhiyo kuburikidza nebrowser, asi mazhinji haashande kubva kuiyo ecosystem, nekudaro ini ndangokurudzira webhu webhu iyo inokutendera iwe kuti uite basa iri nekukurumidza, nyore uye pasina kana dambudziko.
Telegraph bots haingogone chete kutitumira mameseji iwe pausingatombozvifungidzira, asi ivo zvakare vanotipa isu akasiyana mabasa anowedzera zvakakwana mashandiro ezvimwe zvinoshandiswa. Mune ino kesi, kurodha pasi odhiyo kubva kuYouTube mavhidhiyo, isu tine YouTube MP3 HQ Download @ dwnmp3Bot, bhoti raunofanira chete pinda iyo URL yevhidhiyo yeaudio iyo yatinoda kurodha pasi kuitira kuti iwe utore pasi zvakananga kuTeregiramu uye tinokwanisa kuigovana nemamwe mapurogiramu kana kuichengeta mugore rebasa rekutumira mameseji. Iyo URL inogona kuwanikwa zvakananga kubva kuYouTube application, kana kuburikidza neSafari browser, kunyangwe iyo yekupedzisira sarudzo inononoka uye isingashande.
Kuti uwedzere iyo @ dwnmp3Bot bot kune yako yekunyora runyorwa, iwe unongofanirwa kuvhura Teregiramu uye kutsvedza pasi rako rekunyora runyorwa kuti uuye nekutsvaga bhokisi. Mubhokisi rekutsvaga iro unofanira kuisa @ dwnmp3Bot, kudzorera zita reiyi bot semhedzisiro. Izvi bot inowanikwa mumitauro yakawanda, uye inotibvumidza isu kusarudza mhando yekuteerera kurodha pasi nekunyora / zvaunofarira uye kusarudza hunhu hunokodzera zvatinoda.
Chinja YouTube Mavhidhiyo kuva MP3 neJailbreak
Kwemakore uye nekushaikwa kwesarudzo, YouTube ++ rave rimwe rematurusi akanakisa ekugona kurodha kwete chete mavhidhiyo eYouTube, asi zvakare rinotibvumidza kurodha mimhanzi kubva kumavhidhiyo zvakananga tisina kushandisa kubva kune chero chimwe chirongwa . Iyi tweak inowedzera huwandu hukuru hwemabasa matsva kuchishandiso cheYouTube, mashandiro atinogona kusarudza mhando yevhidhiyo yatinoda kurodha pasi, asi inotibvumidzawo kusarudza iyo Audio sarudzo, kurodha chete odhiyo yemavhidhiyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Maitiro ekushandura YouTube Mavhidhiyo kuita Mp3 ne iPhone
Charlie Brown akadaro
Zviri nyore kwazvo neTeregiramu bot
Chokwadi, zviri nyore, asi ini ndakanga ndisingakwanise kuwana bot raishanda zvine mwero uye rakanga rabviswa nekuda kwematambudziko ekopiraiti. Iyo ini yandakangoisa yave kuwanikwa kwenguva uye inoshanda nekukurumidza kwazvo.
Albert AC akadaro
Neapp yeAmerigo unogona kuita zvese izvozvo
Pindura Alberto AC
Chokwadi. Ini ndazviwedzera kuchinyorwa. Ndatenda nekunyora.
Iyo yakanakisa app yeiyi ndiyo JUKEBOX player.Munodhawunirodha safari audios akananga kudropbox uye JUKEBOX inoita mashiripiti !! Iyo yakakwana mimhanzi inoridza !! Ini ndinokurudzira iyo 100% pasina kushambadzira